“ရွှေမြန်မာ”: October 2007
ဒီအကောင်လေးများသည် အလွန်အဆိပ်ပြင်းထန်ပြီး လူသားတစ်ဦးအား ၁၀ မိနစ်အတွင်း သေစေနိုင်ပါတယ်။ (မယုံကြည်သူများ မစမ်းသပ်ပါနဲ့ အာမှ မခံပါ)
လသာမဲ့ ညကို တမ်းတခြင်း
ဒီညဟာ ကျွန်မ အိပ်မပျော်တဲ့ ညတစ်ည
ဒီညဟာ လမင်းအနားယူနေတဲ့ ညတစ်ည
ဒါပေမဲ့ မကြာမီ လပြည့်တော့မယ်
ပြတင်းပေါက်ပေါ် လရောင်က ဖြာအကျ
ဟော လမင်း ထွက်လာပြီ
ကျွန်မပြောပြရင် ပြေးကြည့်ပြီးမှ ယုံပါ
ပြည့်ပြည့်၀၀ တစ်ကိုယ်တည်းလည်း မဟုတ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရှိစေချင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိသော အရပ်မှာ လရောင်လည်း ရှိပေလိမ့်မယ်။ လရောင်ထွန်းလင်းတဲ့ အရပ်၌ လူတိုင်းနေချင်ကြမှာ အမှန်ပါ။ လရောင် အောက်မှာဆိုရင် ဘာမဆို လှပငြိမ်းချမ်းနေမှာပေါ့။ အမှောင်ထဲမှာနေရတာထက် စာရင်တော့ လရောင်အောက်မှာ အသက်ရှင်ရတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကျွန်မသည် တစ်ခဏတာ သာသော လရဲ့အရိပ်ကို တပ်မက်မိတယ်။ လရောင်ကို မြင်ရင် ကျွန်မ ကြည်နူးတယ်၊ ပျော်ရွှင်တယ်။ မအိပ်ဘဲလည်း နေလို့ရတယ်။ လပြည့်ညဆိုအရမ်းပျော်တယ်။ မိုးကောင်းကင်ကို ခဏခဏ မော့်ကြည့်ရတာ အမောပါဘဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ လူတိုင်း အမှောင်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မနေချင်ကြဘူးလေ။ ကျွန်မ အပါအ၀င်ပေါ့။ မိတ်ဆွေတို့ကော အမှောင်နဲ့ အလင်း ဘယ်ဟာကို ပိုနှစ်သက်လဲဟင်...
ဘ၀မှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ချင်တယ်။
သူတစ်ပါး နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်မရှူချင်ဘူး။ အသက်ရှူရမှာကိုလည်း အမုန်းဆုံးပဲ။
ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ စမ်းရေကြည်တစ်ပေါက်တိုက်မယ့်ငု တွေ့ခဲ့ရင် ယမင်းရဲ့
ကုသိုလ်ကံပါပဲ။ အရိပ်မဲ့ နေပူလမ်းမှာ ထီးကမ်းပေးတဲ့သူရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေး မတွေးခဲ့မိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကို မျှော်လင့်အားကိုးပြီး ခရီးသွားမယ့်သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခရီးကို
ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အညံ့မခံ ရှေးခရီးကို ချိတက်သွားရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေမိပါတယ်။
လောကမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်း ဖြစ်လာချင်မှ ဖြစ်လာတတ်သလို မဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေလည်း
ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့၊ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ
ရှေ့ကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ဆက်လျှောက်ရမှာပါဘဲ။ ယမင်းရဲ့ဘ၀က အမှန်ပြောရရင် ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ ခေါ်ရမလား ဒါမှမဟုတ် နည်းနည်းခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုရမလား.... ၁၀ တန်းအောင်ပြီးကတည်းက ကိုယ်လမ်းကိုယ်လျှောက်ခဲ့ရတယ်... ရပ်တည်မှု ကတော့ မိဘရဲ့ အရိပ်အာဝါသပါဘဲ။ မိဘနဲ့ နေရတာဟာ
ယမင်းရဲ့ဘ၀မှာ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပေါ့။ ဒီလို လက်ဆောင်မျိုးဟာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့
မိသားစုဆိုတဲ့ အရာ ယမင်းရဲ့ဘ၀မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ
ဘာကြောင့်လည်းလို့ သုံးသပ်ကြည့်တော့ ဘုရား၊ တံရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ ဆိုတဲ့ ရတနာ ငါးပါဒကြောင့်ပဲ။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့ကို မှာချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ဒီထက် တိုးတက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ကြပါ။
ပြီးတော့ ရတနာငါးပါးကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ အမြဲကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ နောင်အချိန်ရရင်လည်း ယမင်းရဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေဟာ ဘာတွေလည်း ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။
နေ့ကို ရက်စား၊ ရက်အား လမျို
လကို နှစ်စွဲ၊ အမြဲပျက်ပျို
ကလေးက ဒီလောက် အလိုလိုက်တာကိုတောင် ဆိုးတာကို မမကြီးက ရိုက်တာပေါ့။ ဟွန်း
ငါ့မှာ ဘာမှထပ်ပြီး ဆုံးရှုံးစရာ မရှိတော့ပါဘူး
ငါဟာ လူတွေကို စူးစိုက်ကြည့်နေရုံကလွဲပြီး
ငါဟာ မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို
လူတွေဟာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်
ဒီကုန်စည်ပြခန်းကြီးဟာ သူ မဟုတ်တော့သလို
ငါ ရှေ့ဆက် အသက်ရှင်နေပါ့မယ်...
ကဗျာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ယမင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရဲ့ စကားစုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးဆိုတာ အလုပ်လုပ်ခြင်းဘဲ
ဆင်ခြေပေးတဲ့ ပါးစပ် ထမင်းငတ်တတ်တယ်.....
လဲရင် ပြန်ထ၊ ဒါဘ၀ဘဲ
အကျင့်စာရိတ္တသည် ထိုသူ၏ ကံကြမ္မာပင် ဖြစ်သည်
နေသလို မဖြစ်တဲ့ဘ၀မှာ ဖြစ်သလို မနေပါနဲ့
အစာငတ်ရင် တစ်ခဏ၊ စာငတ်ရင် တစ်ဘ၀ ဆုံးရှုံးပြီလေ
လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာလုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်
ရောဂါပြင်းလျှင် ဆေးရှိသည်၊ လူပျင်းလျှင် ဆေးမရှိပါ
ဘ၀ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဒုက္ခကို ဇွဲနဲ့ အလဲထိုးပါ
အပြောနဲ့ ကဲ့ရဲ့တတ်သူကို အလုပ်နဲ့ အနိုင်ယူပါ
အစားထိုးလို့ မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု နှစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက
ဟုတ်တယ်နော်။ သူငယ်ချင်းတို့ကော ဘာတွေလုပ်နေလဲဟင်.....
လှိုင်းတက်ရာ ဗေဒါတက်။ လှိုင်းသက်ရာဆင်း
အုန်းလက်ကြွေ ရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့လာ
အဆင်းနဲ့ အလာ၊ ဗေဒါမ အထွေး
အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး
နောက်တချီ ဒီတစ်လုံးက ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ
မြှုပ်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ
တလံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ
ချောင်းအဆွယ် မြောင်းငယ်ထဲက ဘဲထွက်လို့လာ
ဘဲအုပ်မှာ တစ်ရာနှစ်ရာ၊ ဗေဒါက တပင်ထဲ
ဆရာဇော်ဂျီ၊ တက္ကသိုလ် မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်
အဲဒီ ကဗျာလေးက စိတ်ကို အားရှိစေတယ်လေနော်။
ကျွန်မတို့ ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုထဲကို ရောက်သွားရင် ကျွန်မတို့ရဲ့အာရုံဟာ ပွင့်နေတဲ့ ပန်းများဆီ ရောက်သွားတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့သူများဟာ အမြဲမပြတ်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာရှိသူများရဲ့ ပုံကိုပဲ ရိုက်ယူကြတယ်။ လောကမှာ ပြုံးရွှင်နေတဲ့ လူများကိုပဲ နှစ်သက်ကြတယ်နော်။ မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး မျက်နှာထားတင်းမာနေတဲ့လူနဲ့ မျက်နှာ အမူအရာ မရွှင်မပျဖြစ်နေတဲ့လူတွေကို ဘယ်သူမှ မချဉ်းကပ်လိုကြဘူး။ မိမိတို့က ပြုံးရယ်နေရင် ကမ္ဘာလောက ကြီးကလည်း မိမိတို့နဲ့အတူ ပြုံးရယ်နေလိမ့်မယ်။ မိမိတို့က ငိုနေရင်တော့ မိမိတို့နဲ့အတူ ဘယ်သူကမှ လိုက်ငိုမှာမဟုတ်ဘူး။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတတ်အောင် ကြိုးစားပါ။ မိမိရဲ့ မျက်နှာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ဖြစ်နေရင် တခြားသူများက မိမိကို မိတ်လာမဖွဲ့ဘဲနေမှာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဟုတ်တယ်နော်။ အမြဲ ပြုံးပျော်ရွှင်ပြီး မိတ်ဆွေအပေါင်း တိုးပွားနိုင်ကြပါစေလို့ ယမင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
preferce of trouble
beginer of river of care
centre of sentimentality
topple downacare
that never end of crying......
My hobby is reading. I am in the B.Sc.(Zool)Q(Credit). I have read some of them again and again. Reading has becomeahabit. Reading makethafull man, conferenceaready man, and writing an exact man. Reading is thicking with some one else's head instead of one's own.
Writing is like religion. Every man who feels the call must work out his own salvation. I usually read Myanmar novels, short stories. They are interesting and enjoy able. Magazine, Article, Play and Journal. The characters are flesh and blood. They are just like you or me pr anybody else. They love and theyhate; they laugh and they weep; they dream and they scheme; they live and they die. Novels and short stories give both knowledge and pleasure. I also read books written in simple English. They are mostly from the refold series. I understand them well. They hep me improve my English. I also read myanmar poem in magazines. I like all of them. I haveahome library. My work Bagan Publishing House. I am in the Computer Operator. I have inheritedalot of books from my boss. We have also very good dictionaries. I love books. They are our friends. They are our companions. They are ourguides. They are our guards. They are our refuge.
သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ စွမ်းအားကို ဘယ်တော့မှ လျှော့မတွက်ပါနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူ အနည်းငယ်နဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုက်ပါတယ်။ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးဖို့ဖြစ်စေပေါ့။ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ဘ၀တွေဟာ တစ်နည်းတစ်ဖုံ သက်ရောက်မှုရှိနေကြပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေက နတ်တမန်တော်တွေပါပဲ။ကျွန်မတို့ရဲ့ အတောင်ပံတွေက ဘယ်လိုပျံသန်းရမယ်ဆိုတာကို မေ့လျော့သွားချိန်မှာ သူတို့က ကျွန်မတို့ကို အထက်ကို မြင့်တက်သွားနိုင်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာ အဆုံးအစတွေရယ်လို့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးသူငယ်ချင်ကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အမြဲတမ်း အဖော်မွန်ပါ။ ကောက်းတူဆိုးဖကင် ဝေမျှခံစားတတ်ကြပါတယ်။မနေ့ဆိုတာက သမိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။မနက်ဖြန်ဆိုတာက လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကသာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်တစ်ခုလို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်။သူငယ်ချင်းအားလုံးကို သတိရမိလျှက်
အခုခေတ်တွင် လူတော်တော်များများ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ကျွန်မတို့အပါအ၀င်ပေါ့။အင်တာနက် ဆိုတာကလည်း မြန်မာပြည်တွင်သာမဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိရှိသမျှ လူပေါင်းသိန်းသန်းမက အသုံးပြုနေသော စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးလုပ်ငန်းသုံး ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလေ။ အင်တာနက်ဆိုတာကလည်း ကွန်ပျူတာချည်းမဟုတ် ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ကွန်ရက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကို တိုနီဘလဲက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာကြည့်တိုက်လို့ သုံးနှုန်းသေးတယ်။ ဒါဟာလည်း အများကြီး မှန်တာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဟိုနေရာလည်း အင်တာနက် ဒီနေရာလည်း အင်တာနက်ဖြစ်နေပြီလေ။ကျွန်မ အခုပြောနေတာတွေဟာလည်း ကျွန်မတတ်လို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မှာ အသိလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိနေလို့ပါ။ ကျွန်မရဲ့အမြင်ကို တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုတာကလည်း အသိရှိရင် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်မလိုပေါ့။ အွန်လိုင်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ သူတွေဟာ ပညာရှိ ပညာတတ်မှ ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံချမ်းသားမှပြီးတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမှ အသုံးပြုရမယ်လို့ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ လူတိုင်းအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပဲ။ ကျွန်မဒါကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မက အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းပါတယ်။ မလေ့လာတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။ ကျွန်မအရင်တုန်းက အင်တာနက်ကို ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှ အင်္ဂလိပ်စာမရတာ ပြီးတော့ ကျွန်မဟာ သင်တန်းတွေတက်ဖို့ အချိန်လည်း မရခဲ့ဘူးလေ။ ဘ၀ပေးအခြေအနေပေါ့။ အင်တာနက်ကို ကြောက်လို့ မသုံးခဲ့ရင် ကျွန်မဟာ ယခုအချိန်မှာ လူတွေအများကြီးနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့ပြီပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်မ စဉ်းစားတယ်။ ငါ အခုလည်း သိအောင် လုပ်မယ် တစ်ခုသိလည်း ဒီတစ်ခုဟာ ငါ့အတွက် ပညာပဲဆိုပြီး ကျွန်မ လေ့လာခဲ့မိတာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ ကျွန်မအတွက် ဗဟုသုတများစွာ ရခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မကို ကူညီကြတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျွန်မဘ၀မှာ အမြဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ လေ့လာမိသလောက် ပညာဗဟုသုတတွေကို ကျွန်မကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လေ။ ကျွန်မရဲ့မျက်စိကို ဖွင့်ပေးခဲ့တာဟာလည်း ကျွန်မရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနီးအဝေးမှာရှိကြတဲ့ လူသားအားလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ သူများ အားနည်းချက်ကို ငဲ့ညှာပြီး တိုးတက်အောင် ကြံဆောင် ပေးကြပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျွန်မရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်ကို ပြောရရင် ပညာတွေကိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ကျန်းမာချမ်းသာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဒီနေရာကနေ ကျွန်မ မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင် ဘေးလို့ ပြောရမှာပေါ့လေ......
အဖြည့်ခံလှပဝေဆာ ပန်းဘ၀မှာသာမွှေးနံ့ထုံ ရနံ့စုံစဉ်မြင်သူအပေါင်းကတပ်မက်ကြ၏ပန်းအလှလေးမို့တချို့ကလည်း ဘုရားလှူဖို့တချို့ကျပြန် ခေါင်းထက်ပန်ဆင်လှချင်သမို့သူတို့ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ကိုအို.... ပန်းပွင့်လေးဖြည့်ပေးခဲ့တယ်မနွမ်းခင်လေး ခဏတာမှာသူတကာအတွက်ဖြည့်စွက်ခဲ့လည်းနွမ်းလို့ ကြွေစဉ်ချိန်ခါမှာညတော့စွန့်ပစ်ပယ်ခံ ဖြစ်ရပြန်တယ်သြော်....အဖြည့်ခံ ပန်းဘ၀လေးပါတကား....
Life isastruggle. Nothing in life comes easily. Every living thing (creature) has to do same work to do. But, food does not come to them easily. Animals often fight one another for food. Big animals kil yonger and weaker animals for food. so even animals have to struggle for their living.
With the help of science, life is every wonderfel today. So many new things are invented everyday. But they are not cheap. Every new things are invented everday. But they are not cheap. Every new thing, like the television and MP# player, video, is expensive. Man has to work harder to be able to buy them.
Prices of essential things, food and clothes are rising almost daily. One income is not enough for the family. Every one in the family, must work. A woman's place is no longer in the kitchen only. And many men are doing kitchen work. There are many working wives and working mothers today. I can't kitchen and cooking.
This is the age of work, the age of struggle. I am work busy. he he. but mother is already in the kitchen.
Isn't it the Buddha who gives you blessings. It's our wholesome minds that bear great benefit. The mind is most powerful in the world. We think, speak and act as directed by our minds. Good minds with good intentions perform good actions. These good actions bring good benefits to all. Remember the Newton's Law in physice. To every action there is an equal and opposite reaction. So good actions will bring good reactions and good benefits. That isabeautiful natural Law.
So we must think, speak and act with good intentions. You see. Right. That is the essence of the Buddha's teachings.
We avoid to harm others. We try to help others.
Well, there are ups and downs in life. Don't forget to do meritorious deeds. Perseverance will bring success.
***A woman who is dignified in her ways is respected even by the irreverent.
***A good woman is worth more than rubies.
***A plain woman with moral beauty is more thanabeautiful woman.
*** Love looks not with the eyes, but with the mind.
***Lovers don't finally meet somewhere.
မော်လမြိုင် ကျိုက္ခမီ- စက်စဲ ခရီးစဉ်သွားအမှတ်တရ နေ့ရက်များ
သူငယ်ချင်းတွေကို အမြဲသတိရနေပါတယ်ဆိုတာ ယုံလား
မယုံရင် ဒီပုံကို ကြည့်နော်
၄ နှစ်တာအတွင်း ဆိုးတူကောင်းဖက် သူငယ်ချင်းများ သို့ မမေ့နိုင်စရာ နေ့ရက်များ ဖြတ်သန်းခြင်း
ဘ၀မှာ မမေ့နိုင်စရာ အချိန်များကို
အမြဲသတိရစရာနေ့ရက်များကို အမြဲအမှတ်ရနေမိမှာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရယ်။
တစ်သက်တာမှာ ပုဂံ-ညောင်ဦး၊ ပုပ္ပား ခရီးစဉ်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။
ဘ၀ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းရတော့မယ်
သူငယ်ချင်းများနှင့် အစ်ကိုဝင့်နဲ့ ကိုကြောင် ပြီးတော့ မ၀ါတို့ကို သတိရလွမ်းဆွတ်ခြင်း
ချစ်သူ မုန်းသူ လာတယ်
မိတ်ဆွေ ၇န်သူ လာတယ်
လူရင် သူစိမ်း လာတယ်
လူကောင်း လူဆိုး လာတယ်
ကြွယ်ဝသူ ဆင်းရဲသူ လာတယ်
ပညာရှင် ပညာမဲ့ လာတယ်
အမျိုးသား အမျိုးသမီး လာတယ်
..... လာတယ် ...... လာတယ်
အစောင့်အရှောက်မဲ့ အိမ်နဲ့ မတူတဲ့
ဘယ်လို လူမျိုး လာပါ
ဘယ်လို လူမျိုး မလာရ
ပြိတ္တာ ငရဲသားများ မလာရ
ငါ့မှာ ရွေးချယ်ကန့်သတ် ပိုင်ခွင့်မှ မရှိဘဲကွယ်
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: for you
အဝေးကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးလေ တောင်စွယ်တွေ ခြားကန့် ငုံ့လျှိုးတာပဲ ရှိတယ်။
လေတွေ တိုက်တယ် နှင်းတွေ ကျတယ် နေခြည် ဖြာတယ် မိုး ရွာတယ် လ သာတယ်
နာရီ(ဒေသစံတော်ချိန်) ကွာတယ် ဘာသာစကား ခြားတယ် ဒါဟာ အဟန့်အတား မဟုတ်ခဲ့
မဟာ သံယောဇဉ်ကို ပဲ့ကြွေစေမယ့် ဥပေက္ခာဘွဲ့ အပ်နှင်းပွဲမှ မဟုတ်တာဘဲ
တစ်ခါတစ်ရံ ကြံကြံဖန်ဖန် အမှတ်ရ
စိတ်က ဘာလိုလိုနဲ့ (သြော်.... သူ့ခမျာ)
မော်စကို မြို့သားကြီး တစ်ဖြစ်လဲ
မိဘတွေနဲ့ကွဲ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ခွဲ
လူစိမ်း သူစိမ် စရိုက်စိမ်း သံယောဇဉ်စိမ်း ယဉ်ကျေးမှုစိမ်း
ဓလေ့စရိုက်စိမ်း ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းစိမ်းကြားထဲမှာ
ဘာသာစကား ကွဲပြားမှု နေထိုင်မှု လွဲမှားမှု စားမှု သောက်မှု
လူမှုကိစ္စ ပြဿနာ ကမောက်ကမတွေကြားထဲံမှာ
အားငယ်နေမလား နိုးကြားနေမလား တက်ကြွနေမလား ကြိုးစားနေမလား
ခွဲံခွာခဲ့ရသော သူငယ်ချင်းများသို့ လွမ်းဆွတ်ခြင်း
ဘ၀ရဲ့ ခါးသီးမှုပမာ ငါတို့ဝေးကွာကြပြီဆိုပါတော့အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ဖို့ရာငါ့မှာ စကားလုံးတစ်လုံးတောင် ရှာလို့ မရခဲ့ဘူးပေါ့။၀ဋ်ရှိရင်လည်း ပြေပါစေလူခြေတိတ်တဲ့ ထောင့်ကလေးတစ်နေရာမှာငါတစ်ယောက်ထဲ ကြေကွဲနေပါမယ်....လောကမာယာ မင်းတို့ ဖြတ်သန်းလရောင်ဆမ်းချိန် ကြုံတဲ့အခါငါ့နာမည်ကို မေ့ထားလိုက်ပါလေ....အခက်အခဲတစ်ခုအဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတဲ့အခါငါ့နာမည်ကို သတိရပါစေ.....
ကိုယ်ကြိုးမကြည့်စေတနာထားကြိုးစားလုပ်ကိုင်အားလုံးအတွက် အမြဲရှေ့တန်းတင်ခဲ့အခက်အခဲဟူသမျှ ဖြေရှင်းပေးပြီးနောက်ဆုံးတော့....ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ကားအဘယ်မှာနည်း.....
ဘယ်လိုမှ မဆုံဆည်းနိုင်တဲ့ဘ၀မှာအတိတ်က အရိပ်တွေ တရေးရေးတွေးပျော်ရွှင်မှုတွေ စဉ်းစားကာယူငါ၏ဘ၀ ဖြေသိမ့်ခဲ့ရကိုယ့်အပေါ် ကောင်းသူတွေ့ခဲ့သလိုမကောင်းသူလည်း တွေ့ခဲ့ရဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မစဉ်းစားချင်ရင်ထဲမွန်းကြပ် အခံရခက်စွာလက်တုံ့ပြန်စိတ် ရင်ထဲမရှိခဲ့ကျွန်မဘ၀အတွက်သင်ခန်းစာလို့ မှတ်ယူဒါဟာ ကျွန်မ ရင်ထဲကအမှန်တရားသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတဲ့သူ၊ လူအများကိုလည်း လေးစားတဲ့သူရဲ့ မျက်နှာဟာ အင်မတန် ကျက်သရေ ရှိတယ်။ခင်မင်စရာ လေးစားစရာ ကောင်းတယ်။ ဒီလိုလူဟာ စိတ်လည်း ပိုအေးချမ်းတယ်။နူုံးညံတယ်။ ဒီလိုလူဟာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်တယ်။.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတဲ့သူ၊ လူအများကိုလည်း လေးစားတဲ့သူရဲ့ မျက်နှာဟာ အင်မတန် ကျက်သရေ ရှိတယ်။ခင်မင်စရာ လေးစားစရာ ကောင်းတယ်။ ဒီလိုလူဟာ စိတ်လည်း ပိုအေးချမ်းတယ်။နူုံးညံတယ်။ ဒီလိုလူဟာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဖြစ်တယ်။
သို့အမေဝေးတစ်မြေကနေသားအကြောင်း တွေးနေပြီလားဖွေးနေတဲ့ဆံပင်ဖြူနဲ့သားအတွက် အရင်လိုပူနေဆဲလားသားအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်မလာဖို့မေတ္တာပို့နေဆဲလားတရားသံနာပျော်ရင်းနဲ့သားစာအပြန် မျှော်နေဆဲလားအခုဆိုရင် အမေ့ရင်ခွင်ထဲက ခွဲလာတာခြောက်နှစ်တာပြည့်ပြီပေါ့အမေစာမရေးတာ နှစ်ချို့လို့အဖြစ်ဖို့လို့နေပြီလား အမေမနှစ်မြို့စရာလူတွေနဲ့ အတူနေခဲ့ပြီးမှပကာသနဆိုတာတွေသိလာပြီအမေလောကဘ၀နဲ့သားအတွက်အားတက်စရာ အမေ့အေးရိပ်ချွေးသိပ်ခွင့်ပြန်ရချင်တယ်အမေ။
ဝေးကွာနေသော အမေများသို လရိပ်ချစ်သူ ကဗျာမှ
Murphy's law by Arthur Bloch
ပြဿနာတိုင်းရဲ့ အဖြေဆိုတာ အဖြေရှာသူတွေအပေါ်မှာ တည်ပါတယ်။
သင့်စီမံကိန်း မအောင်မြင်ခဲ့ရင် သင်မတွေးတော မစဉ်းစားမိတဲ့ အရေးတကြီး ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကို တွေ့အောင် ရှာဖွေပါ။
ကိစ္စတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်မကြည့်တဲ့လူအဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိပါဘူး။
နေရာတစ်နေရာကို ငါ ရောက်နေတယ်...
ငါ ဖြတ်သန်းမယ့် နေရာလေးတစ်ခုပေါ့....
အဲဒီလို အတုမရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးထဲ
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အေဒီဆင်သည် သူ၏ စမ်းသပ်ရှာဖွေမှု အောင်မြင်သည့်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကင်းပပြုလုပ်နေသည်။ ပါတီ တက်ရောက်လာသော သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးက သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အေဒီဆင်ကို
ဆရာ အောင်မြင်မှုဟာ ဆရာရဲ့ကံကြောင့်လား
သတင်းစာဆရာတစ်ဦးမေးသော မေးခွန်းကို အေဒီဆင်က ပြုံးပြီး အဖြေပြန်ပေးသည်။
ကံ မလို့ ကျုပ် အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်အောင်မြင်မှုရဲ့ အကြောင်းတရားကို ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဥာဏ်က တစ်အောင်စလောက်ပါပြီး ၀ီရိယက တစ်တန်လောက်ပါတယ်
အေဒီဆင်၏စကားကို အသေအချာ စဉ်းစားကြည့်သင့်သည်။ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခု အောင်မြင်မှုမရှိလျှင် ကံကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး
ဟု မြည်တမ်းနေကြသည်။ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းကိစ္စထမြောက်အောင်မှု မရှိခြင်း၌ ၀ီရိယ၏ အပိုင်းအစ ဘယ်လောက်ပါသနည်းဆိုသည်ကိုမူ ထည့်တွက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြသည်။ ကံကိုသာ အကြောင်းတရားအဖြစ် ပုံချနေကြသည်ဖြစ်၍ ၀ီရိယကို မေ့နေကြသည်။
** Love me with thine hand stretched out freely open minded.
*** Only Three things are infinite:
the sea in its drops of water,
ဘ၀ခြင်းတွေ ဘယ်လိုပင် ခြားစေတော့
သူ ရှိနေသည့် အသိလေးနှင့်သာ
ရင်မှာ မျှော်လင့် တောင့်တနေပေမယ့်
မေတ္တာတရားရဲ့ တကယ့်ပန်းတိုင်ဟာ စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်မှုနဲ့ အသိÓဏ်ဖြစ်ပေါ်ရေးပါ။
ပင်လယ်ပဆုပ်ပနီကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကောင်လေးများသည...
ကလေးက ဒီလောက် အလိုလိုက်တာကိုတောင် ဆိုးတာကို မမြ...
သေမင်း ဆောင်ယူသည်ကို မည်သူမျှ မတားဆီးနိုင်...........
***A woman who is dignified in her ways is respect...
လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ကျင့်သုံးဖို့ စကားလုံးတစ်ခုကတော့ြ...
မော်လမြိုင် ကျိုက္ခမီ- စက်စဲ ခရီးစဉ်သွားအမှတ်တရ နေ...
၄ နှစ်တာအတွင်း ဆိုးတူကောင်းဖက် သူငယ်ချင်းများ သို့...
သူငယ်ချင်းများနှင့် အစ်ကိုဝင့်နဲ့ ကိုကြောင် ပြီးတေ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတဲ့သူ၊ လူအများကိုလည်း လေးစားတ...